Ukuqapha Umlando Wokuthuthukiswa Kwekhamera
Manje, noma ngabe usekhaya, noma uphume uyothenga, udla, ukudlala, ukudlala, yonke indawo lapho ungabona khona ikhamera yokubheka. Manje ungasho ukuthi umsebenzi wosuku lwakho kanye ne-LI ...
Manje,Ukuthi usekhaya, noma uyothenga, udla, ukudlala, nomaphi lapho ungabona khonaIkhamera yokubhekwa. Manje ungasho ukuthi usuku lwakho'Umsebenzi nokuphila kubhalwe kwikhamera. Manje amakhamera wokubhekwa ajwayelekile, khona-ke ukuthi uthuthuka kanjani, khona-ke kufanele sibheke ukuthuthukiswa komlando wamakhamera we-Surveillance.
Iminyaka engeyona i-Intanethi, i-Intanethi ayikhuli kangako manje. Ngawo-1970 futhi'Ama-90s, amakhamera we-analog, ama-analog optical transceivers kanye namateyipu wevidiyo we-analog bekukhona ngaleso sikhathi. Ikhamera ye-Analog iyindlela yokuvala umjikelezo, ingabhekwa kuphela ngaphakathi, hhayi ukuqashwa okukude, idatha yevidiyo ingagcinwa kuphela, kepha futhi inethuba lolwazi akulula ukwebiwa futhi libhujiswe.
Ngo-2000 kuya ku-2005 isizukulwane sokuqala samakhamera wokuqapha we-analog-digital, uhlelo lokulawula i-analog luqukethe amadivaysi e-analog namadivayisi edijithali. Imishini ye-Analog, kufaka phakathi imishini ye-Analog Camera, amarekhodi we-Analog hard disk kanye ne-analog matrix, imishini yedijithali, aUkuvikeleka Ikhamera,Iseva yevidiyo, amarekhodi enethiwekhi ye-Hard Disk, Matrix yedijithali. Uhlelo lokuqapha lwe-analog-digital lumukela i-Ikhamera ye-Analog, kanti isiginali yevidiyo idluliselwa kwimishini yedijithali (efana neseva yevidiyo, i-encoder, i-digital hard disk video rekhoda, ibona ukucindezelwa kanye nokufaka amakhodi, bese iguqula ilungele ukudluliswa kwe-ethernet. Isiginali yevidiyo yedijithali.
Ngo-2005-2010, ukuqashelwa kwabezindaba kwe-IP kwaqala ukuchuma. Ikhamera ye-IP ngokuvamile ibhekisela kwikhamera yenethiwekhi, okubandakanya ikhamera ejwayelekile, iseva yevidiyo, ikhadi lenethiwekhi, isoftware yohlelo lokusebenza, futhi ezinye zifaka nekhanda nelensi yokusondeza. Ingacindezela izithombe ngenethiwekhi yokudluliselwa, njll. Lokhu kusho ukuthi unganakekela ukude nesitolo sakho, isimo somndeni.
Ngo-2010, ngemuva kwe-IP kuye esikhathini sokushintshana ngokugcwele. Uhlelo lokuhlola okugcwele lwe-IP lusebenzisa i-Digital Front-End, maphakathi nokuhanjiswa kwezinsizakalo zesikhungo sangemuva sangemuva, isitoreji se-back-ukuphela kusetshenziswa i-Professional IP SAN Disk Array, ukudluliselwa kwevidiyo nokudlulisela phambili kusatshalaliswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zemishini yokushintsha inethiwekhi , Ingxenye eboniswayo ye-decoder iguqula isinali ye-IP ibe isinali ye-analog noma isibonakaliso sedijithali sokuthi idivaysi yokubonisa iyakwazi ukubona. Ubuchwepheshe bokwakhiwa kwezokuphepha esikhathini esizayo senze iminikelo emihle.
Manje abantu bayaqhubeka nokusungula, isayensi nobuchwepheshe bayaqhubeka nokuthuthuka, ngikholwa ukuthi imininingwane yekhamera yokubheka izoba incane, isithombe esicacile, ukufakwa nokusebenza kuzoba lula ngokwengeziwe.
PHAMBI Lapho ubheka ubuhle bendawo, kuyakubona endaweni
Eminye imiphumela yekhamera ye-CCTV OLANDELAYO